सावधान ! फेसबुकको यी नियम पालना नगरे बन्‍द हुनसक्छ तपाईको अकाउन्‍ट - Khabar Break
सावधान ! फेसबुकको यी नियम पालना नगरे बन्‍द हुनसक्छ तपाईको अकाउन्‍ट
फेसबुकले सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सुरक्षा अन्तर्गत यसमा हुने यौनजन्य सामाग्रीदेखि लिएर बुलिङ जस्ता कुरा भएमा केहि समयको लागि चेतावनी स्वरूप बन्द गर्ने गरेको छ । त्यस्तै बालबालिका जन्य यौन सामाग्री सेयर गरेमा भने फेसबुकले च्याट सुविधा तथा लाइकजस्ता यसको फिचर अस्थायी रूपले बन्द गर्ने गरेको छ । यदि पटक-पटक दोरिएमा भने खाता सधैँको लागि बन्द हुने हुन्छ ।